SingForYou.net - Min Pay Tae Kabar
Min Pay Tae Kabar
Tags : နန်းဝါ၀ါမောင်
By : MH on Feb 2, 2010
Score: 90 Rating: 5.00 Comments: 38
Min Pay Tae Kabar's Description
Duet song ဆိုပါဦးလို့ ညီမတယောက်က ပြောလာလို့။ကိုယ်ကလဲကြိုက်လို့။သတိတွေလဲရလို့။ တခါက Duet ပီပီသသ ညည်းခဲ့ဖူးတာပေါ့။ အခုတော့တယောက်တည်းခြောက်သံလုပ်လိုက်ရပြီ။
clover on Feb 26, 2010 0
chauk than so lo. bar myar lae lo. pop ...... thay char nar htaung dod girl so daeapine kaathan ka tone nay tal pop naw....tha chinn sone khan nee hma pal tha baw pauk dod tal....... :D bravo bro......
panshwe on Feb 5, 2010 0
oh, wow!!! .taw lite tar.. ma tu ag ko so naing tae.. *********************************
thant on Feb 5, 2010 0
athan2than ko.......so ng tar taw lite tar.........par ya me shin par bae......sing more duet like that.......*******
skyblue84 on Feb 5, 2010 0
very very ve......ry good , bro.
nanwarwarmg on Feb 5, 2010 0
၀ိုးးးး ဆိုထားတာ တအားကြီးကို ကောင်းတာပါပဲ.. ၂ ယောက်စလုံး ဆိုထားတာ တကယ်ကို ကောင်းတာ။contests ၀င်ပြိုင်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Good Luck ★★★★★
MH on Feb 5, 2010 0
အဟီး ဂယ်လား ....
lalaynge on Feb 4, 2010 0
ဒီသီချင်းကိုနားထောင်လိုက်လိုက်ချင်း MH ဆိုတာ မိန်းကလေးလား ယောင်္ကျားလေးလားလို့ အရင်ကဆိုထားတဲ့ သီချင်းအသံ သွားပြန်နားထောင်ရသေးတယ်.:D အဲလောက်ထိ ခွဲလို့ မရအောင် ဆိုထားတာ ကောင်းတာ.. စတားတွေ အများကြီးပေးခဲ့ပီ..
ဟိဟိ ..လုပ်လိုက်ပဟ...ထပ်ဆိုချင်သေးတယ် credit က ရှာနေရတယ်။ စောင့်ပြီးအားပေးကြနော်။
yellownavy on Feb 3, 2010 0
Wow... Wow... Wow... Ko MH, you are so TALENTED! You can't imagine how much I enjoyed this singing of yours especially the female role... I don't even know what else to say... I simply LOVE it... You certainly deserve more than 65.... and I like your male role singing better than MMK's... pls accept my respectful 5*...
wooo ma yellow yay, i am really happy for reading your comment. I try my best for you ..keep support me sis :P
susannyunn on Feb 3, 2010 0
:O :O :O :O ..... DESCRIPTION ma read yin...gal g ko htin mi mar pelz.....main ka layathan nelz ,,htet tu htet mya par pelz..achoutathan ma hutttttttttttttttttttttttttt....:no.... i luv it xo xo much.....great performance......i realli aprreciateeeeee itttttttttt......keep ur work up bro g...aheeeeeeeeee:))))))))))))))))))))
ဟီးဟီး ဘယ်လိုဆိုဆို အားပေးနေကြတာ SFY က သူငယ်ချင်းတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းပ
maureen on Feb 2, 2010 0
so nice to listen ur song... love it.. ********************* for u...
မော်ရင်း... ၀င်တဲ့အချိန်လွဲနေတာထင်တယ် မတွေ့တာကြာပြီညီမရေ... ကျေးဇူးနော်
9naing on Feb 2, 2010 0
wow.... unbeliveable..... :O :O :O ....... bro MH.... great great!
MH on Feb 2, 2010 0
ကိုနိုင်း အားကျတယ် အားကျတယ် အဟိ
paradise on Feb 2, 2010 0
A ha ha...mite dal byar........a chaut than gyi ma hote par buu......ta gal main ka lay ...a than ne tu dal naw.....a yan kg dal....so htar tar.........try more brother..********
သွားပါပြီ သွားပါပြီ....သူပြောမှပဲ လုံးလုံးကိုလိုင်းပြောင်းရပါပြီ....အပါ .. ဟွန်း
meemeenage on Feb 2, 2010 0
နားထောင်အား ပေးသွားပါတယ် ဟီးဟီး
အွန့် ဘာတုန်း ဟီးဟီး ဆိုတာ.... နာတိတယ်နော်
sumaylay on Feb 2, 2010 0
haha..........athan 2myo nae par lar........ta kal ko taw par pay tal bro.........:D..........*****
အဟီး ချုမေလေး ... သိုင်းကရူး
moeluu on Feb 2, 2010 0
Nice duet.. ko)MH, you did really well.. i mean single on duet song... Thumbs Up!*
ကိုမိုး ဟီးဟီး ကျေးဇူးနော် ... နဲနဲပေါကြည့်တာ။
turikimuriki on Feb 2, 2010 0
wow... really great .. love it . *************
ဟယ် သော်တကီမော်တကီလေး ရှဲ့ ရှဲ့
thuyeekg on Feb 2, 2010 0
အဲ့ဒါ ခြောက်သံလားဟင် ရင်တောင်ခုန်လာပြီဟယ်...ညီးကတော့နော်။
Ilovemusic on Feb 2, 2010 0
ခြောက် သံလေးက.....ရင်တောင်ခုန်ချင်စရာလေး.....ဟီးဟီး...လိုင်းပြောင်းတော့ မလို့လား ဟ....ဟိဟိ..။ ( really perfect singing par...MH gyi yay....5*4yr great song....sat swel htar mel...Bro.)
ကိုကိုချစ်ရေ....လိုပဲတို့ကတော့ခေါ်မှာပဲကွယ် ကိုကိုချစ်ရေ....အွန့် ကိုကိုချစ်ရေ...
tnh on Feb 2, 2010 0
အခြောက်သံ လုပ်လည်းနားထောင်လို့ ကောင်းတာပါပဲ။ ဘယ်လိုများ ဆိုလိုက်သလဲမသိပါဘူး။ တကယ့်ကို ပါရမီရှင် ပါပဲ bro ရေ။ 5********************
ဟွန့် ပါစရာလား ဒီပါရမီက ခေါ်တော့ဘူး။
Phyogyi on Feb 2, 2010 0
Woooooooooo..Great ... Performance..:!!!!!!!!!..byar.. Really...Really....Really....Nice and Perfect..!!!!! par byar.Nothing to say Other..bro..MH yay ..Many**** ****************************...par byar ...:)))))).သဘောကျလွန်းလို့ ဗျာ..နားထောင်ရတာကိုပြော တာနော်..:P:P:P.....nar htaung arr pay twar par telz..byar..:))))))))))))))))))bro..RPG
ကဖြိုးကြီး ....ဂယ်လား ဂယ်နော်
darhayhso on Feb 2, 2010 0
hal ... bal lo lae naw.. heehee 5****
တီလို တီလို အဟိ
whitekisslay on Feb 2, 2010 0
ဘီလို ဘီလို ဆိုသွားလဲမသိဘူး....နားထောင်ရင်း အဆုံးထိမျောပါသွားတယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း Ko MH:)
အမလေး တော်တော်ပင်ပန်းနေဦးမယ်...ဟေ့။ တကထဲနော် ။ အဲဒီလောက်လဲ ခေါင်းမသုံးပါနဲ့အေ။